Myanmar Muslims face charges for holding Ramadan prayers | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMyanmar Muslims face charges for holding Ramadan prayers
June 3, 2017 June 3, 2017 drkokogyi
Police charge three men who prayed in street after school where they used to worship was shut down by nationalists
Friday2June 2017 15.31 BSTLast modified on Friday2June 2017 15.41 BST
Authorities in Myanmar have charged three Muslim men for holding Ramadan prayers in the street after the local school where they used to worship was shut down byanationalist mob.
Police brought the charges after about 50 Muslims gathered to pray on Wednesday onaroad in Yangon’s Thaketa township, the site of one ofagrowing number of raids by Buddhist hardliners on Islamic events.
Two nearby Islamic schools were closed in late April after ultra-nationalists complained that local Muslims were illegally using them to conduct prayers.
Authorities have said the closure is temporary, but have given no timeline for when they may be reopened.
“We feel sorry. This month is important for us,” said the local Muslim leader Zaw Min Latt, referring to the holy month of Ramadan, which began last week.
Local authorities issuedastatement saying the prayer session threatened “stability and the rule of law” in the mainly Muslim neighbourhood in the east of Myanmar’s commercial capital.
A police officer who asked not to be named confirmed the charges.
Two officers tried to stop AFP journalists from filming when they visited one of the madrasas on Friday.
“It’s our mosque as well as our school. We don’t know when it will be reopened,” Khin Soe,alocal resident in his 50s, said as he set off to pray in another part of town.
The case comes as Myanmar’s government has been seeking to clamp down on hate speech afteraspike in anti-Muslim actions by hardliners from the country’s Buddhist majority.
Religious tensions have soared sinceagroup of Rohingya Muslims attacked police posts in Rakhine state in October, sparkingabloody military crackdown that has drawn widespread international condemnation.
Last week Myanmar’s top Buddhist authority officially banned the Ma Ba Tha, an ultra-nationalist movement affiliated with the firebrand cleric Wirathu, which responded by simply changing its name.
The move came after nationalists this month clashed with Muslims in another Muslim neighbourhood in Yangon, after pushing police to raidahouse there in search of illegal Rohingya Muslim hideouts.
၀တ်ပြုဆောင်တွေကို ချိတ်ပိတ်ထားလို့ လမ်းပေါ်ထွက် ၀တ်ပြုတယ်။ ၀တ်ပြုတဲ့လူတွေထဲက ဦးဆောင်တယ်လို့ ဆိုသူတွေကို တရားစွဲတယ်။
ဒါက တရားသော လုပ်ရပ် ဟုတ်/မဟုတ် ကမ္ဘာကြီးက ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားတို့ေ-ာက်ရှက်မရှိတဲ့ အစိုးရက ရှက်တတ်မှာ မဟုတ်တာသေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ကို ကမ္ဘာက တံတွေးထွေးမှာ အသေအချာပဲ။
ေ-ာက်ဥပဒေက ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို လိုက်ပြီး ပြောင်းနေလို့ မရဘူး။
ကရင်ပြည်နယ်ကေ-ာက်ကတုံး သူများ သာသနာပိုင်မြေတွေမှာ သွားပြီး စေတီဆောက်တော့ ခင်ဗျားတို့ေ-ာက်ဥပဒေတွေ ဘယ်နားသွားထားခဲ့သလဲ?
Where are OIC members: Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Malaysia, Indonesia, Brunei, Iran, Pakistan and Bangladesh etc Muslim leaders and Muslim NGOs like WAMI, Abim Pusat, MAPIM : Malaysian Consultative Council for Islamic Organization ?
No voice heard at all.
We only heard protest notes and news from our GOOD CHRISTIAN FRIENDS: NGO, Journalists etc.
No wonder Allah swt is pleased with the Christians but made the divided, squabbling amongst themselves, greedy, corrupt and selfish Muslims were ignored.
← ရခိုင်မူစလင်ဆိုင်ရာ သမိုင်း အချက် အလက် များ
Ma Ba Tha @ CLAWFINGER – Nigger →
12 thoughts on “Myanmar Muslims face charges for holding Ramadan prayers”
တနေ့ မနေ့ ကတင် မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီး တဦး
(ဒေါ်စု လုပ်ပေးမှာပါ…..ဒေါ်စုကို အပြစ်မမြင်ပါနဲ့……..
ဒေါ်စုမှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသေးလို့ပါ…..
ထွေ/အုပ်နဲ့ ပြည်ထဲရေးက…ဒေါ်စုအမိန့် မနာခံသေးလို့ပါ….
ဒေါ်စုကို အချိ န်ပေးကြပါ……
ကျနော်တို့က ဟိုဒိုင်ဘီယာ စာချု ပ် လိုမျိုး လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်..)
7 hrs · Kuala Lumpur ·
ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအခန်း(၉)ပုဒ်မ-၂၁ ပြဌာန်းချက်ကရပ်/ကျေးအတွင်းနေထိုင်သူ သည် (၁)အခမ်းအနားများ (၂)အများပြည်သူဖြေဖျော်သည့်ပွဲများ (၃)ပြပွဲများ (၄)ပြိုင်ပွဲများ (၅)ရိုးရာဓလေ့အရပြုလုပ်သည့်ပွဲများကျင်းပလိုပါကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံမှခွင့်ပြုမိန့်ရယူရမည်—–ဟုသာဖော်ပြပါရှိပါသည်။ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ကိစ္စမပါရှိပါ။သို့သော် အခန်း(၁၀)ရပ်/ကျေးအတွင်းနေထိုင်သူများ၏အခွင့်အရေးများ ပုဒ်မ -၂၄(ခ)တွင် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်သက်ဆိုင်ရာရပ်/ကျေးအတွင်းနေထိုင်သူများ၏ ” ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များဆောင်ရွက်ခွင့် ” အခွင့်အရေးများကို ” စောင့်ရှောက်ပေးရမည်။”-ဟုအတိအလင်းပြဌာန်းထား ပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများ မိမိ၏ပြည်သူများကို ပုဒ်မ-၂၁ အရအရေးယူမှာလား?(သို့) ပုဒ်မ-၂၄ အရစောင့်ရှောက်ပေးမှာလား?—ဆိုတာအဂတိတရားတစ်ပါးပါးမဖက်ဘဲဆောင်ရွက်နိုင်ကြ
ပါစေ။ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းသည်ပုဒ်မ-၂၄(ခ)အရဘာသာသာသနာဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်၍ ပုဒ်မ-၂၁ နှင့်ငြိစွန်းခြင်းမရှိပါ။ပုဒ်မ-၂၆ အရအရေးယူ၍မရပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးပြဌာန်းချက်များနှင့်လည်းဆန့်ကျင်ပါသည်။ဥပဒေအထက်သို့ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
Credit U Ohn Maung
Maung Maung Ko
June 1 at 12:54pm · Yangon, Myanmar ·
ကြီး မား တဲ့ စွန့် စား ခြင်း၊ စွန့် လွှတ် ခြင်း တွေ နဲ့ လုပ် ခဲ့ ကြ တာ ကို
ခြီး ကြူး ပါ တယ်..တ ဖက် က ကြည့် ရင် လည်း…အ သျှင့် လမ်း မှာ..
တိုက် ပွဲ လို့ ပြော လို့ ရ မယ် ထင် ပါ တယ်..
အ သျှင့် ဖက် မှ…ဖေး ကူ မှု များ ကျ ရောက် ပါ စေ…
လွယ် ကူ သက် သာ မှု များ…ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ..
တ ဖက် လူ များ စိတ် ပေါ် လည်း..ဟေဒါယက်…ပေး ပါ စေ..
Singapore ရဲ့ Channel Nes Asia က ဒီလိုဆိုပါ
အနီးအနားက အာရဗီ စာသင်ကျောင်းတွေကို လူစုလူဝေး
တွေက ဧပြီ နောင်းပိုင်းမှာ တရားမဝင် ဝတ်ပြုသည် ဟူသော
ယခု ဝတ်ပြုရန် နေရာမရှိ၍ လမ်းဘေးတွင် ဝတ်ပြုသော
ရန်ကုန်မြို့သား မွတ်စလင် များကို ရန်ကုန် အာဏာပိုင်များက တရားမဝင် ဝတ်ပြုမှု့ နှင့် တရားဆွဲဆိုထားပါသည်။
ဒါ ငဒို့ လူ့အခွင့်အရေး နိုဘယ်လ် ဆုရှင်ကြီး
State Counsellor လုပ်နေတဲ့l
သူမရဲ့ NLD ပါတီက အာဏာ ရယူထားတဲ့ ဗမာပြည် ကွ။
ဒီသတင်း မျိုးကို မြနန္ဒာ မှတ်နေရင် ဆက် က လိုက်ပါ။
သို့သာ သွားရောက် စုံစမ်းရန်သာရှိခဲ့ပါသည်။
ထွေအုပ်မင်းများ ကူညီမှု့ကြောင့် ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊မိတ္ထီလာမြို့
များသို့ပါ သွားရောက် စုံစမ်းရန် အကြောင်းဖန်လာပါသည်။
ဤကဲ့သို့ IFFM လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချဲ့ထွင်ပေးသော
Civil Rights Movement(Thailand)
Maung Myomyint with Nyi Nyi.
June 1 at 9:52pm ·
လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ DASSK ကိုမေးပေးကြစမ်းပါဗျာ။
ငြိမ်း ချမ်း ရပ်ကွက်တိုင်မှ လမ်းမပေါမှ အရေး
ပေါ လမ်းကြားမြေကွက်တွေမှ တရားမဝင်ဓမာရုံတွေအများအပြား
ကြပါ ကိုယ်ပိုင်မြေမဟုတ်ဘဲ အများ
အဲဒါ ဓမ္မအရေးလါး အာဓမ္မအရေးလါး
Myintmo Maka ကျမ်းစာနဲ့ပြုရတဲ့ဝတ်ပြုမှုပါ
Chit Chit Oo ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းနဲ့၁၁၈လမ်းထိပ်မှာဓမ္မာရုံကြီးကိုလမ်းပေါ်မှာ
So Hail ကိုင်းးးးးးးးးး
ပြည်ထဲရေးကမဖမ်းလိုပါ ကျနော်တိုပြည်သူနဲ့အတူ ပါလိုပြောပြောနေတဲ့
အမတ်မင်းတို အခုစာထုတ် ခြိမ်းခြောက်တာ
ခဗျာတို ထွေအုပ် ကလေး
ကကျနော်တိုခဗျာတို့အတွက်တော့ အတူတူပါပဲ
Violet Wallpaper ဒါဆိုဗလီကို
KO Thet လမ်း၃ ၄ ၅ ရက်ပိတ်ပြီးတရားပွဲလုပ်တာကောရပါသလား လူအများသွာလာတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာနော် လမ်းသွယ်မဟုတ်ပါ
မောင်သစ်စာ မောင်သစ်စာ ​နောက်​အိမ်​မှာ​တောင်​ဝတ်​ပြုမရဘူးလာမည်​မခုခံသ၍ခံရအုံမယ်